Home » Akụkọ njem » Price Waterhouse weputara omumu banyere ulo nkwari akụ Nairobi
Price Waterhouse weputara omumu banyere ulo nkwari akụ Nairobi
Nwere ike 15, 2015
Lọ ọrụ na-ahụ maka nyocha ego na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nyocha ọnụahịa Price Waterhouse Coopers (PWC) ewepụtala nnyocha na Kenya nke akpọrọ "African Travel Travel Report".
Nnyocha ahụ na-egosi na ka ọ na-erule afọ 2017, Nairobi ga-enwe ike inye ndị ọbịa nhọrọ nke ime ụlọ 20,000, ma e jiri ya tụnyere ọnụ ụlọ 17,800 dị ugbu a.
Onye na-esote imeghe ga-abụ 5-kpakpando Radisson Blu, na-eweta ụlọ 256 ọzọ na ụlọ ndị ọzọ na isi obodo Kenya, na-esote n'afọ ahụ site na ọrụ abụọ ọzọ - Grand Sapphire na Golf View Hotel.
A na-ewu Hilton Garden Inn na-arụkwa n'okporo ụzọ awara awara na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, nke kachasị ọhụrụ na họtel họtel na Nairobi nwere na Sheraton Four Point ga-esonye na igwe mmadụ n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, dịkwa nso na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa.
E kwuru na Best Western nwere mmasị ịgbasa pọtụfoliyo Kenya ha, nke ugbu a gụnyere Best Western Premium na Nairobi na Best Western Plus na Mombasa, na mgbe ịnọ na Kempinski izu ole na ole gara aga, General Manager Manish Nambia, kwadoro na Ndị nwe Villa Rosa Kempinski Hotel na-aga n'ihu na atụmatụ ha site na imeghe akara nke ụlọ oriri na nkwari akụ atọ aha ha bụ Acacia, nke mbụ ga-abụ na Kisumu na ọdọ mmiri Kenya.
Nke a dị iche n'ụzọ dị ukwuu na akụ na ụba nke isi ebe ndị njem nleta n'ụsọ osimiri, ebe ewezuga ọtụtụ nnukwu ala na ụlọ, ọ nweghị ebe ọhụụ ọhụụ dị na pipeline.